I-bungalow yangasese yango-1907 - I-Airbnb
I-bungalow yangasese yango-1907
1,006 okushiwo abanye
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Janet
I-bungalow esanda kulungiswa futhi yasemaphandleni yango-1907 ene-vibe ye-bohemian. Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, ikhishi langasese negumbi lokugezela. Izivalo ezingu-3 ukusuka ebhishi, ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ezitolo kanye ne-pier. Ubhavu omkhulu we-Jacuzzi Neshawa enamanzi ashisayo angapheli. Ukupaka emgwaqweni nokusetshenziswa kwephasiwedi yokupaka. Indawo evamile egcekeni elingemuva ene-bar, i-BBQ, isiteji, nokuningi. Imibuthano ingenzeka. Siyayigcina kusenesikhathi ngezimpelasonto futhi ingahamba kuze kube ngu-2am ngezimpelasonto. Idekhi esokhakhayini lwesakhiwo ingabantu abadala kuphela nezingubo zokugqoka ngokuzithandela.
4.66 out of 5 stars from 1006 reviews
4.66 · 1,006 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-1,006
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Venice Beach, Izitolo, Izindawo Zokudlela Nezokuzijabulisa Kwasebusuku, e-Santa Monica Pier, 3rd Street Promenade
Akukho ukuxhumana okuningi okudingekayo, ngaphandle kokuthola ukhiye nokudluliselwa kokupaka uma kudingeka. Kodwa umnikazi wendlu nabaqashi abazungezile banobungane kakhulu futhi bangasikisela njalo izinto okufanele zenziwe nezindawo zokuya.
Akukho ukuxhumana okuningi okudingekayo, ngaphandle kokuthola ukhiye nokudluliselwa kokupaka uma kudingeka. Kodwa umnikazi wendlu nabaqashi abazungezile banobungane kakhulu futhi b…
Inombolo yepholisi: 226237